Iphupha malunga ne-avalanche Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ingqele enkulu yekhephu, amatye, okanye udaka oluqhekeka entabeni kwaye, njengoko isantya sisanda, siyithwala xa sisihla ngentili. Rhoqo, zonke izixeko zingcwatywa phantsi kwayo. Kwiindawo zemidlalo zasebusika ezinjengeeAlps, kwenzeka kaninzi ukuba i-skiers okanye i-snowboarders zibangela isilayidi sekhephu kwaye zibhukuqiwe kwaye zangcwatywa yi-avalanche. Kunqabile ukubaleka kwaye kuphela ngethamsanqa elikhulu.
Uhlangulo lwenziwa yinkonzo yokuhlangula entabeni, ihlala isebenzisa oko kubizwa ngokuba zizinja ze-avalanche. Inja yohlangulo iqeqeshelwe ukufumana abantu abanjiswe ngumkhenkce. Kukho izixhobo ezikhethekileyo zokukhangela i-elektroniki ezinokufumana amaxhoba kwindawo yekhephu, iscree, okanye ukungcola.
Zininzi iindidi ngeendidi zeerandi, kuxhomekeka ekubeni amandla endalo avela phi: kwahlulwa phakathi kweerali zamatye, izithambeka zethambeka, izithambisi eziphakamileyo, izithambisi ezingaphezulu, izithambisi zomhlaba, izithambisi ezinamanzi, izithambisi zomkhenkce kunye neerandi. Ecaleni kwekhephu, ukugqabhuka komhlaba lolona hlobo laziwayo lwe-avalanche.
Ngokwenene unako "Ivelise ubundlobongela"kubangela ukuphendulwa kwetyathanga ngegama okanye inkqubo, eyonyukayo kwaye kube nzima ukuyilawula ngaxa lithile. I-avalanche yetafile yesinyithi ithetha iimoto ezime kwiitramu ezinde ezindleleni kuhola wendlela, ekhula ngakumbi nangakumbi ngokuhamba kwexesha.
I-avalanche phantse ihlala ithetha ingozi enkulu. Nabani na ophupha ngelinye unokuphakuzela, athathwe ngabantu, aze angcwatyelwe phantsi kwabo. Ukubaleka kuhlala kuyinto yokuqala. Kungenxa yoko le nto kubaluleke ngakumbi ekutolikeni amaphupha ukuba umntu ophuphayo ubona indlela i-avalanche efikelela ngayo entlanjeni, okanye ukuba yena usengozini.
Ezinye iimeko zephupha zivela rhoqo kunabanye; Kukwenzeka oku nakwimifanekiso yephupha ye-avalanche. Yazi awona maphupha athandwayo ngoku:
1 Isimboli yephupha «I-Avalanche» - amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
1.1 Bona i-avalanche ephupheni, phuma apha!
1.2 Ukubanjwa kwi-avalanche-iphupha elibi!
2 Uphawu lwephupha «ukudilika» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ubundlobongela» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «ukudilika» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha «I-Avalanche» - amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
Bona i-avalanche ephupheni, phuma apha!
Ukubona i-avalanche ehambayo ngelixa ulele iphakamisa isenzo okanye isitatimende esinemiphumo. Nangona kunjalo, umntu ophuphayo ebengalindelanga ukukhula okuza ngenxa yoko. Ukuzisola kuza emva kwexesha kakhulu ukuba umntu akayifumani indlela yokucela uxolo okanye ukulungisa izinto.
Ukubanjwa kwi-avalanche-iphupha elibi!
Ukuba ubhaqwe likhephu ephupheni lakho ezintabeni kwaye ungcwatyelwe ngaphantsi kwakho, unokuba namaxesha amabi kwaye ungaphumeleli. Ukubanjiswa phantsi kwekhephu, ukungcola, umkhenkce okanye ubumdaka, njengemeko yamaphupha, zihlala zikhomba kwithemba lokuba kufuneka bangcwatywe. Amandla athatha ngokomfuziselo ukumba kwakhona emini mhle. Kuphela ngabo bafumana inkxaso yangaphandle ekufuneka beqhubekile nokubambelela kwinkohliso.
Ukungcwatywa uphila ephupheni kubonisa ukuba umntu ophuphayo uzibona ngokwenyani engenandlela yakuphuma. Imeko ebomini bakho imile kangangokuba ufuna uncedo ekufumaneni isisombululo.
Uphawu lwephupha «ukudilika» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko lamaphupha, uphawu lwephupha "i-avalanche" iyafana nogonyamelo olungalindelekanga. Ukukhawuleza kweemvakalelo. Ngokuphupha umbuzo uvela, zeziphi iimvakalelo ozicinezeleyo ixesha elide kwaye kufuneka ujongane njani neziphumo zokuba intetho enjalo ngequbuliso kwintlalo yoluntu.
Ubundlobongela ephupheni bumele into, ukuba iphupha liziva licinezela kwaye linzima. Ukuba uthabatheka yiyo, oko kuthetha ukuba ilahleko kulawulo ekuchazeni amaphupha. Kuya kufuneka uzame ukubuyisa ulawulo lobomi bakho ngokukhawuleza.
Njengophawu lwephupha, intlekele yendalo injenge-avalanche. isilumkisongakumbi xa ungcwaba into phantsi kwayo. Ekuchazeni amaphupha aphela ngokomfanekiso wephupha. ukuhluleka y Uloyiso phakathi. Amathemba amaninzi awazukufezekiswa. Nangona ukuphupha kunethuba lokoyisa isigaba esibi, nangona kunjalo, kuya kuthatha amandla amaninzi ukuphinda ukhululeke kwakhona.
Nabani na obona i-avalanche iwela ephupheni kusenokwenzeka ukuba uthethile okanye wenze into, ethi ibangele iimpendulo ezingalindelekanga kwabanye. Ukuphupha akunakuphembelela ukukhula, kwaye ke uyazisola ngokuziphatha kwakho. Ngokunokwenzeka kuya kufuneka uzame ukugcina into enokugcinwa. Ukuba i-avalanche ichitha indlu ye-ski xa ulele, kufuneka uziphathe ngokuthozamileyo xa kuhamba ubunzima.
Uphawu lwephupha «ubundlobongela» - ukutolikwa kwengqondo
Ekuchazeni amaphupha, amanzi amele iimvakalelo, kwimo engumkhenkce, ebonisa ukuphola kweemvakalelo. Umkhenkce nekhephu luphawu lokungeniswa kunye nenzondo, mhlawumbi ngenxa yokuncipha komzimba. Ngokwehlazo, ezi mvakalelo zingumkhenkce ziyavela ephupheni kwaye zinokonakalisa. isiphumo ukuhambisa. Into ebangele uhlobo lokuqhushumba ephupheni kwaye uphawu lwephupha luyichaza ngokomfuziselo.
Ukuba i-avalanche ephuphileyo ingumdaka ongwevu, umntu uyakruquka kukusila kwemihla ngemihla el mundo yomlindo. "Unamathele" ebomini bakho, uphethwe kukuma okungafunekiyo. Ukuhamba kunye notshintsho zizinto ezinokwenziwa ngumphuphi.
Awungekhe ubaleke amandla Uhlobo lwengqumbo, kufana nokufa kwakho. Ukusuka kule ndawo yokujonga, ngokweendlela zohlalutyo lwengqondo, uphawu lwephupha lukwasisimemo sokumelana ngenkalipho nengozi kwaye woyise uloyiko. Le ngozi inokusoyikisela ngaphandle, kodwa ikwalele nakwiphupha ngokwalo. Iingxabano zengqondo kunye noxinzelelo kufuneka kujongwane nokuzazi, ukuze ubuthongo bube nakho ukulawula.
Okubaluleke ngakumbi ekutolikeni kwamaphupha ziimvakalelo umntu anazo xa evuka ephupheni: Yeyiphi imikhondo esele iphupha? Ngaba ukhululekile kwaye ukhululekile ukuba ubundlongondlongo bungakhutshwa? Okanye usazaliswe kukuphakuzela kukothuka? Ke, umphuphi kufuneka ajonge imeko ebomini bakhe.
Uphawu lwephupha «ukudilika» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya, uphawu lwephupha "i-avalanche" libonisa amandla aphelisa iimvakalelo zephupha.
Ukutolikwa kwamaphupha, ubundlobongela bubonisa ukuba umntu ophuphayo akanako ukuwaphikisa la mandla kwaye woyisiwe ngawo. Kuya kufuneka ukuba uzibuze ukuba zithini na izinto zakho ukukhula ngokomoya thintela.